Mambo Jesu Christu Vari Kudana Vari Merenje, Teerera Izwi Rake Jesu Christu | St Peter's Holy Apostolic Church
Mambo Jesu Christu Vari Kudana Vari Merenje, Teerera Izwi Rake Jesu Christu
Hama dzangu ndinokukwazisai mose muzita raIshe wedu Jesu Kristu.
Mudikanwi wakawanirwa nyasha huru kwazvo naIshe.Tiri munguva yakanaka yavari kushevedza.Izwi guru riri kuita maungira hanzi,"Huyai titaurirane mazwi ehumambo.Zvikuru sei imi vane nzara nenyota yekururama muchazogutiswa.Huyai vakaneta nevakaremerwa ndinokuzorodzai."
Jesu vanoda kuti iwe neni tipinde mudenga dzvene dzvene umo mune mufaro watisati tamboona pasi pezuva.
Matthew 22 vs 1-13 inotaura pamusoro pehumambo hwekudenga ichifananidza nemumwe mambo,akaitira mwana wake mabiko emuchato.Asi mushure mekunge zvese zvavepo akanetsa mukokwi.
Unoziva zvinoshungurudza kwazvo kuti waverenga vanhu vachakukuta pamuchato.Seyemazuva ano matafura nezvigaro zvinenge zvanyatsorongwa,nechikafu chinoenderana nehuwandu hwevanhu vari kuuya.Vamwe vanoita zvemberi nemazita anenge anyatsoiswa pakanangana nechigaro chemunhu wega wega.Izvi zvinoratidza kuti varidzi vemuchato vanenge vachinyatsotarisira kuti munhu akakokwa achakoshesa zuva iri nenguva iyi agosiya zvose ouya kuzopembererera muchato.
Ipapo ndopakasvotwa Mwari.Vaita zvese zvavaigona ndokutumira nhume kuvanhu vaIsrael vekwaJuda kuti," chiuyai ..."Vanhu vaye ndokubuda nezvikangaidzo zvemhando dzakasiyana siyana.Zvimwe zvavaive vatozoronga mushure mekunge zuva remuchato varinzwa zvavo. Kana uriwe muridzi wemuchato unonzwa kudzikisirwa zvakanyanya uye kusaremekedzwa.Kuti chokwadi here zvese zvavepo kwasara kuvapo kwako chete iwe munhu akakokwa ndopowomuka uchiti pano nepano.
Mambo iyeye ndivo Mwari.Nyika iri kuvatora sebenzi.Pekutanga vakaita mabiko emwanakomana wavo Jesu.Ndokumugadzirira zvose zvakanaka.Vakakoka vanhu vanokosha verudzi rwaJuda kuti vazofara pamabiko aya.Ndosaka mainzwa Jesu achiti "ndakainga vaJuda." Ndokuchiti kumukadzi uye muCanaan,"Handingape chikafu chevana kumbwa." Jesu aisatuka mukadzi uyu kwete asi aida kuratidza kuti muchato wake mumakore panguva iyoyo waive wakanangana nevana veimba yaIsrael verudzi rwaJuda Mark 7 vs 27 .Ndovaive nechitsiidzo naMwari chavaida kuzadzisa.Vanhu vaIsrael havana kukoshesa kukokwa uku.Vakapa zvikonzero zvakasiyana siyana zvaivatadzisa kuuya kunaIshe.
Mwari havana kugumirwa.Vakaiongorora nyaya iyi vakati aikaka ko nyika zvaizere nevamwe vanhu.Ndokuti kuvatumwa nemafundisi endai munyika yese mungokoka chero.Ndopatiri isu hama mudikanwi.Wapinda pachero munhu wamaona apa.Mwari vazarura denga ravo.Vati zvekuda kumboti maIsraeri chete hazvifambe saka hakuna muJuda, muSamaria kana muhedheni.Ani naani anotenda kwaari achava nehupenyu husingaperi.Ari kutopinda pamuchato wegwayana chete mumakore panouya Jesu Kristu rwepiri.Luke 12 vs 35 Nguva yatiri ino vatumwa vedenga navaporofita vezvokwadi vatumwa nababa vedu vari kudenga kuti vataure newe nhasi.Uri kukokwa.Mwari pavakanzwa zvipingaidzo zvevana vaIsrael vakapa chitsvambe kunhumwa dzavo kuti dziuye navo vese chero munhu wamunenge mawana.Ngaauye kumutambo nekuti zvese zvavepo.
Iwe hama yanguwamiswawo nei kuenda kumutambo?Waita rombo rakanaka kusangana nenhume yaMwari nhasi iri kuti huya wakadaro.Hauna kunzi huya nemari kana nenhumbi dzakanaka,asi hanzi zvauri izvozvo Jesu vachakupa zvavainazvo zvakakunakira. Ndopaunoona munhu awanirwa nyasha dzakadai achitopawo tuzvikonzero kwazvo' kutodadira mukana wakadai.Hanzi ndichazoti ndonamata.Haisi nguva yekuverengera kuita zvinhu zvaMwari.Kana kutsvaga kuti unepfuma yakadii usati wanamata.Vazhinji vanopedza nguva vachimhanyisana nezvenyika.
Unoziva here kuti nguva iri mumaoko aMwari.Kana shoko rekukokwa kunaIshe rakambosvika mukati menzeve dzako ukashaiwa kutevera Ishe Jesu, ucharaswa kune rima guru uko kuchava nekugeda geda kwameno.Kuseri kweguva hakuna muteuro.usazoda kuyeuka bako wanaiwa kare.Nguva ndiyoyi yekutendeuka nekusiya mabasa erima.
Nguva yapera hama vadiwa.Zvese zviri pasi pezuva hazvina maturo nekuti zvinopfuura.Hauone here mviromviro dzemhanza dzaveko kunze.Baba kana mai vaakuziva mwana wavo wekubereka pabonde.Vakadzi vaakuchata nevakadzi,varume vaakuchata nevarume.Kwaane church dzinonwa ropa revanhu huye dzinotobuda pachena kuti dzinonamata satani.Mafundisi aakukarira mari nekuchiva vakadzi vemukereke.Vaporofita venhema vawanda vamwe vari kuisa mweya yemademon pavanhu zvigoita seminana izvo mabasa ewakaipa.Ngwarira usvinure meso ako mudikani.Jesu vave pedyo kuuya.
Kana vouya hazvina kuvanzika.Vachapenyera nyika yose pasi rigodengendeka.Zuva richasviba nemwedzi ugosvibawo.kwete zvatiri kunzwa kuti Jesu ari kuAmerica inhema chete.
Chii chauinacho chinokutadzisa kunamata.Kana iri pfuma hauzive here kuti siveri nendarama ndezvaMwari.Tarira mavakirwo aro Jerusarema idzva.Migwagwa yegoridhe nemasvingo akavakwa nematombo anokosha.
Zvipfeko here nekuti ukaona kushongedzwa kwakaitwa maruva nezvisikwa zvesango hakuna munhu aneunyanzvi hunodarika hwavo Jehovha.
Huya kunaIshe vanokuda uye vanokuchengeta.Vanotaura vachiti,"... ndiri mufudzi akanaka...".Kureva kuti paunorara ivo vanenge vakakurindira.Paunorwara vanokupepa.Paunoneta vanokutakura pamapapiro avo.David oti mubhuku yeMapisarema,"...anondisesedza pasi pamufuro manyoro,ondiradzika pamvura inozorodza."
Ndiani angaramba rudo rwakadai.Vakauya Jesu kuzofira iwe pamuchinjikwa kuti mhosva dzako dzese dziregererwe naBaba vari kudenga. Ko sei uchida kunyengererwa naMwari kuti uvanamate? Mudikani hauzive here kuti Mwari vakawandirwa zvikuru nevanhu vekuvanamata. Tarira kuti ipapo vakakokwa pavakaramba kuuya kumutambo asi imba yakazadzwa nevanhu vakakokwa kubva munzira. Mumwe akakoshesa munda wake pane muchato.Nhasi pane ari kuramba kunamata nekuda kwemibato yake yemaoko.Anofunga kuti akaita zvekunamata anozoita rombe.Mumwe akabva aenda kunotengesa machira anokosha.Mumwewo ndokuti hanzi ndakawana.Munoziva pane zvimwe zvinhu zvatinodadazika nazvo tichikanganwa kuti hazvifambe kana Mwari vasina kukomborerea.Unoziva here mudikanwi kuti imba inomiswa nenyasha dzaMwari.Ukaita yekuvhaira nayo inoputsika ukagariswa pasi.Kuroorwa kana kuroora ngazvirege kukushaisa denga. Vamwe ndovakatoshungurudza nekuuraya nhume dzacho.Kuita dzekuponda.Kuuraya kunenzira zhinji.Kubaya nepfumo chaiko kana kutaura zvinoodza moyo kana zviito zvinobvisa munhu pana Mwari.
Mudikani vanhu vangani vawakapa rekufuga nerekuwarira vauya kwauri neshoko raMwari.Mumwe anoenda kukereke kunovhevha mafundisi agovawisira pasi.Kuvasiya vabva pana Mwari.Uri muurayi kana wakadaro.Ngatikoshesei nhume dzaMwari dzinouya neshoko reruponiso. Pachasvika nguva yekutsvaga Jesu asi nguva inenge yapera hama.Jesu anenge asisawanikwe.Kana gomo richaramba kukwirwa kuti unamatire imomo.Kana shumba icharamba kukudya kuti ufe. Uchatsvaga muporofita ugomushaya nekuti anenge aenda neakamutuma.Uchatsvaga mufundisi asi uchamushaya nayewo nguva yake inenge yakwana.Fara ufarisise nemukana uno wekuwana vaparidzi nemaporofita vachikubatsira kuti uyambuke.
Pachava nekutambudzika kukuru kwazvo nemazuva anotevera.Shoko rauchanzwa nderinenge riri pahwendefa yemoyo wako.Satan achaomesa moyo saPharao zvekuti anongonzwikwa achiti Mwari anenge achiuraiwa.Wese asina number dzechikara anenge asingabvumirwe kutenga.Vanekutya mukati mavo ndipo pavachasarira ipapo.Vonamatiswa mwari wenhema.
Akakomborerwa anonzwa shoko nekuriita.Vamwe vedu zvinzinzinzi zvisinganzwe.Rinoparidzwa shoko svondo nesvondo asi moyo unoramba wakasindimara.Kutoita chijairire zvinhu zvaMwari.Iko kakungofunga kuti zvichazova rinhiko takanguri tazviudzwa kare kare.Zvoita sekuti hazvimbofa zvakaitika.Izvo ndomashandiro asatani iwayo.ari kuda kuti uvarairwe ugosara panoenda vamwe.
Vane zvipo zvemweya ibvai mazvishandisa zvachose hapana chekumirira.Denga razarurwa.Mwari vari kungodururira zvemweya wavo pamusoro penyama yose.Hameno vanoramba.
Takakomborerwa zvedu tikamunamata iye zvino achawanikwa.Tikadana kwaari achiri pedyo.Tobva tarambira pana Jesu kudzimara nekusingaperi.
Dai Mwari vakubatsira nhasi watendeuka.Kwete mutendi garments chete anongotsvaga kushandirwa asi mutendi chaiye anotsvaga ukama namweya mutsvene.
Mukomborerwe kudzamara nekusingaperi.
In Jesus Christ! Amen